Vakasungirwa Kuramba Kupinda Muchiuto kuDominican Republic | Bhuku Regore ra2015
Vakasungirwa Kuramba Kupinda Muchiuto
Enrique Glass uye jeri repasi raakamboiswa mariri kwemavhiki maviri
Musi wa19 June 1949, chikwata chevanhu vainge vatiza muDominican Republic chakadzokera ikoko nendege kuti chiedze kubvisa mudzvinyiriri Rafael Trujillo pachigaro. Kunyange zvazvo chakakurirwa nokukurumidza, hurumende yaTrujillo yakaisa mujeri vanhu vairamba kupinda muchiuto, kusanganisira chero ani zvake aionekwa nehurumende semhandu. PaZvapupu zvakatanga kusungirwa kuramba kuita zvechiuto paiva naLeón, Enrique, naRafael Glass pamwe chete nezvimwe Zvapupu zvaishanda naLeón.
León akati: “[Ini nevandaishanda navo] takasungwa tikabvunzurudzwa nematikitivha emuchiuto. Pashure pekunge tatyisidzirwa, takasunungurwa, ndokuzoshevedzwa papera mazuva mashomanana kuti tiite basa rechiuto asi mashevedzere avakatiita haasiriwo aiwanzoitwa. Patakaramba kuita zvaidiwa, takaendeswa kujeri. Ikoko takaona zvimwe Zvapupu zvina, uye vaviri vacho vaiva mukoma nemunin’ina wangu. Patakasunungurwa takabva tapiwazve mumwe mutongo. Izvi zvakaitika katatu, tichiti tikasunungurwa kwezuva rimwe chete kana maviri todzorerwazve mujeri. Patakapedzisira kusungwa takaita makore mashanu mujeri, uye makore ose atakaita mujeri anoda kusvika manomwe.”
‘Kunyange patairohwa nezvimiti nepfuti, taigona kutsungirira nesimba rataipiwa naJehovha’
Hama dzaigara dziri pamuedzo padzaiva mujeri. Siku nesikati dzaitsvinyirwa nevamwe vasungwa nemagadhi. Mukuru mukuru wekuFort Ozama, kwadzakatanga kuvharirwa, akati: “Zvapupu zvaJehovha, pamunenge mava zvapupu zvaDhiyabhorosi mozondiudza ndikusunungurei.” Zvisinei, vaipikisa havana kukwanisa kukanganisa kuperera kwehama idzodzo dzakatendeka. León akataura chikonzero chacho achiti: ‘Jehovha aigara achitipa simba rekutsungirira uye taigona kuona kupindira kwaaiita achitibatsira kunyange muzvinhu zvidiki. Kunyange patairohwa nezvimiti nepfuti, taigona kutsungirira nesimba rataipiwa naJehovha.’
Zvapupu zvaJehovha Zvinobhanwa
Kwose kwose munyika yacho, vanhu vaivenga kunamata kwechokwadi vaiwedzera kutambudza Zvapupu. Kunyange zvakadaro, pakazosvika May 1950, muDominican Republic mainge mava nevaparidzi 238 tisingaverengi mamishinari. Panhamba iyi paiva nemapiyona enguva yakazara 21.
Pepanhau rinozivisa mutongo wakapiwa hama dzedu nemhaka yekuramba kupinda muchiuto
Panguva iyoyo mumwe mutikitivha akanyorera Mabharani waPurezidhendi, achiti: “Vanhu vekachitendero keZvapupu zvaJehovha vari kuramba vachibishaira kuita mabasa avo kwose kwose muguta rino [Ciudad Trujillo].” Akawedzera kuti: “Zvakare ndinoti pane zvatinofanira kuita neZvapupu zvaJehovha, sezvo mabasa azvinoita uye kuparidza kwazvinoita kuri kukanganisa mafungiro evanhu, zvikurukuru vanhuwo zvavo.”
Munyori wemapurisa, J. Antonio Hungría, akaudza Hama Brandt kuti vanyore tsamba vachitaura pamire Zvapupu panyaya yebasa rechiuto, kusaruta mureza, uye kubhadhara mitero. Vakanyora tsamba vachishandisa mashoko emubhuku rinonzi “Mwari Ngaave Wazvokwadi.” Zvisinei, musi wa21 June 1950, Munyori Hungría akapa murayiro wairambidza mabasa eZvapupu zvaJehovha muDominican Republic. Hama Brandt vakashevedzwa kuhofisi kwaHungría kuti vazvinzwire murayiro wacho. Hama Brandt vakabvunza kana mamishinari aifanira kubuda munyika yacho. Hungría akavaudza kuti mamishinari aigona kuramba arimo kana aizoteerera mutemo uye aisazoudza vamwe nezvechitendero chavo. *
^ ndima 1 Mumavhiki mashoma mutongo wacho usati wapiwa, vapristi veRoma vakanyora nyaya dzakareba mumapepanhau vachishora Zvapupu zvaJehovha uye vachinyepa kuti zvaiita zvechicommunist.